Fanisanandro feno sary saka nalaza haingana tao amin’ny Fiangonana Ortodoksa Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Desambra 2015 10:32 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, Ελληνικά, 日本語, polski, English
Ny pejy volana oktobra an'ilay fanisanandro tsy fahita firy mampiseho ny moanina Theodorit sy ny sakany Monya. Sary avy amin'ny pravmir.ru.
Tsy mbola nahita ny saka sy ny Fiangonana Ôrtôdôksa Rosiana ho mifanakaiky sy mifandray ampy aoka izany angamba ianao. Nisy vondrona kristiana mavitrika iray namoaka fanisanandro an-tsary ahitana ny volana 12 ho avy io voaravaka sarim-pretra ôrtôdôksa miaraka amin'ny sakany. Ny fanisanandro “Pretra + Saka” navoakan'ny Artos, fikambanan'artista kristiana iray, no mikendry ny hampiroborobo ao Rosia ny “kolontsaina Orthodoksa maoderina”.
Raha nahitana fiovan-dalana ny fanisanandro Pirelli nivoaka farany indrindra (tamin'ny fialana kely tamin'ny sarim-behivavy miboridana feno fihaikana), dia tarafina ho miova andalana amin'ny fanisanandro ôrtôdôksa mahazatra ny “Pretra + Saka”, noho ny fahazarana mamoaka sarin'olo-masina sy ikônina—ka tsy hahagaga raha nalaza avy hatrany ilay izy.
Nopihan'ilay mpaka sary Anna Galperina ao an-tranon-dry zareo tsirairay avy, ambony sezalava miaraka amin'ny ondam-body na ambony dabilio ireo mpitondra fivavahana mitsiky be volombava sy manao raoby. Ny taona 2016 dia hanomboka amin'ny sarin'ny arshipretra Oleg Batov sy ny sakany antsoina hoe Apelsin, ary Atoa Febroary—arshipretra Pyotr Dynnikov izay mamelona fialofam-biby—dia azo sary miaraka amin'ny biby an-tranony anankiroa, Angola sy Vasik.
Santionany amin'ny pejy isam-bolana amin'ny Fanisanandro “Pretra + Saka”. Sary avy amin'i Xenia Loutchenko ao amin'ny Facebook.
Araka ny nolazain'ny mpandrindra ny tetikasa, ny mpanao gazety Xenia Loutchenko avy ao amin'ny tranonkalam-baovao ara-pivavahana Pravmir, ny “Pretra + Saka” dia azo heverina ho fitambaram-balinteny ôrtôdôksa rosiana amin'ny Calendario Romano italiana mivoaka isan-taona, manasongadina tanora pretra katolika tsara tarehy sy ny fanisanandro I gatti di Roma ahitana ny sakan'i Rôma.
Nilaza i Loutchenko fa tsy nisy fanamboaramboara-pihetsika ny fotoana nakana ny sary hanaovana ny fanisanandro, amin'ireto pretra mitondra ny sakany mandritra izany fotoana izany: “Natao ho an'izay manan-tsaka sy vonona alaina sary izany.” Nanitrikitrika ilay mpanao gazety fa tsy tohanan'ny Fiangonana Ôrtôdôksa Rosiana amin'ny fomba ofisialy ny Fanisanandro, ary aingam-panahy azy avy amin'ny bokin-tsary momba ny fiainana andavanandron'ny Rosiana mpitondra fivavahana.
“Tsy mahita fahotana lehibe aho eto,” hoy ny mpitondratenin'ny Fiangonana Ôrtôdôksa Rosiana, ny Hajaina Indrindra ny Arshipretra Vsevolod Chaplin, naneho ny heviny tamin'ny fanisanandro. “Betsaka ny pretra manantsaka, ny saka manana pretra, indraindray aza misy saka monina ao am-piangonana. Fa tsy hametaka fanisanandro tahaka izao amin'ny rindriko aho na izany aza.”
Misy ihany koa ireo mpiseraseran'ny RuNet toa manampisalasalana amin'ilay fanisanandro, manontany ny hevitra ara-panahy amin'izao fisantaran'andraikitra izao.
Oh, Tsy fantatro… Efa zatra amin'ny hevitra aho hoe an'ny lahika (izao tontolo izao) ny resaka saka, ny fandraisana anjara amin'ny “The Voice,” sns, neefa eto isika mahita mpitarika fivavahana manana toerana ambony sy ny toy izany
Raha tsara amin'ny ankapobeny ny setriny avy amin'ny nahita, dia misy kosa ireo olona mihevitra ny tetikasa ho “kitsch.” [mangidingidy na ratsiratsy] “Nahita ny fanehoan-kevitr'ireo lavitry ny Fiangonana aho, tahaka ny hoe “Tsy misy na inona na inona afa-mamonjy ireo pretra ireo, tsy ho afaka ny hihatsara ny sariny na dia miaraka amin'ireo saka ireo aza!” hoy i Loutchenko niteny tamin'ny gazety Komsomolskaya Pravda.
Nisara-kevitra ihany koa ny mpiserasera tamin'ny tetikasa “Pretra + saka” araka ny hita ao amin'ny zoro tsipy hevitra ao amin'ny tranonkalam-pivavahana Pravmir, izay iasan'i Loutchenko. Olona iray tsy nitonona anarana :
Tsara ny sarintava, sariaka ny pretra, saingy hafahafa ny hevitra. Tsy kintana mpihira ny pretra ka ho apetraka amin'ny fanisanandro. Tsy havana akaiky ihany koa. Azo heverina hoe misy ny olon manao komandy fanisanandro ahitana ny havany. Saingy hafahafa ity kinasa ity.
Manohitra ny tsikera amin'ny faharatsian'ny hevitra ny mpiserasera Elena Gatchinskaya.
Inona ny olana eto? Fanisanandro mahazatra ho amin'ny taona ho avy ity. Hampahatsiahy anao momba an'i Kristy ny pretra ary enti-manohitra ny rarintsaina ny saka. Ary hampahatsiahy anao an'i Kristy ihany koa irreo. “Avelao ny mananaina rehetra hankalaza an'Andriamanitra.” Maninona no maro no ratsy fandraisana an'ilay izy ?
Nilaza i Yekaterina Kovrigina fa aleony pretra no hita amin'ny mariky ny taona ho avy, gidro—vetivety dia lafo ny fanisanandro ahitana ireo biby ireo ao Rosia, ary efa niely eny amin'ny kiôska fivarotan-gazety izany fanisanandro ahitana gidro izany.
Tsara kokoa ny pretra miaraka amin'ny piso toy izay ireo gidro isankarazany manenika ny kiôskan-gazety ireo.
1000 isa no natonta voalohany tamin'ny fanisanandro “Pretra + Saka” fa mety hisy indray ny fanontana pirinty manaraka. Amidy any amin'ny fingonana maro ao Moskoa ny fanisanandro amin'izao fotoana izao ary azo alaina antserasera koa